पर्वतका अनिश बने लिगलिगे राजा::Online News Portal from State No. 4
पर्वतका अनिश बने लिगलिगे राजा
गोरखा, २९ असोज — चेपे र मस्र्याङ्दीको दोभानदेखि लिगलिगकोटसम्मको १३.५ किलोमिटर ५८.२५ मिनेटमा पार गर्दै पर्वतका धावक अनिश थापा एक बर्षका लागि लिगलिगे राजा भएका छन् । एक सय २२ जनालाई पछि पार्दै पर्वतको फलेबास नगरपालिका २ थापाठाना निवासी नेपाली सेनाका थापा नवौं लिगलिगे राजा बन्न सफल भएका हुन् । थापालाई एक समारोहका बीच श्रीपेच पहि¥याई सम्मान गर्ने तयारी छ । उनलाई पालुङ्टार नगरपरिक्रमा गराउने आयोजक पालुङ्टार नगरपालिका आयोजक संस्था लिगलिग विकास अभियानले जनाएको छ । विजेता थापाले ६० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पारेका छन् । त्यस्तै निर्धा्रित दूरी ५८.४० मिनेटमा पार गर्दै बागलुङका तीर्थ पुन दोस्रो र ५९.२१ मिनेटमा पार गरी नेपाली सेनाका रामजी बस्नेत तेस्रो बन्न सफल भएका छन् । दोस्रो हुनेले ३५ हजार र तेस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय महिलातर्फको दौडमा सुनिता गिरी प्रथम भएकी छन् । खुल्ला महिलातर्फको दौडमा पुष्पा भण्डारी र भेट्रानतर्फको दौडमा धर्म महर्जन प्रथम भएका स्थानीय धिरज थापाले जानकारी दिए । चारसय बर्षअघि दौडेर लिगलिगे राजा हुने परम्परालाई जगाइराख्न लिगलिगे दौडको आयोजना गरेको अभियानले जनाएको छ । इतिहासअनुसार लम्जुङका राजकुमार द्रव्य शाह चेपेघाटबाट लिगलिग कोटसम्म दौडेर राजा बनेका थिए । इतिहासको सम्झनामा बिगत नौ वर्षदेखि लिगलिगकोट विकास अभियानले दौडको आयोजना गर्दछ ।
प्रथम उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन प्रतियोतिा अन्र्तगत तेक्वान्दोका खेलाडि छनौ
ढोरपाटनमा ‘हाइ अल्टिच्युट’ खेल मैदान बन्ला ?
बागलुङको गौरव : दिनेशले हात पारे दुई स्वर्ण